Nambaran’i Thaksin Shinawatra, Praiminisitr’i Tailandy, ny Fanafoanana ny Parlemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2018 2:33 GMT
Tamin'ny 8:40 alina, oran'i Bangkok androany, nambaran'ny Praiminisitra Thaksin Shinawatra tao amin'ny fahitalavitra nasionaly ny fanafoanana ny Parlemanta rehefa avy nahazo fihaonana niaraka tamin'ny Mpanjaka tany am-piandohan'ity hariva ity izy.
Nilaza izy fa hetsika hamerenana ny fahefana ho an'ny vahoaka mba hampanajàna ny fitsipika ara-demokrasia ity fanapahankevitra ity.
Amin'ny 2 Aprily no hisian'ny fifidianana indray mandeha hifidianana ny governemanta vaovao.
Navoaka ampahibemaso ilay fanapahankevitra rehefa niakatra ny tsindry avy amin'ny vahoaka nitaky ny fialàny taorian'ny fivarotana ny fandraisana anjaran'ny fianakaviany amin'ny fifehezana ny Shin Corp tamin'ny Temasek, ilay masoivohom-panjakana misahana ny fampiasana vola ao Singapaoro. Niampanga azy ho nivarotra an-tsokosoko ary nanangana ilay fifanarahana mba hialana amin'ny fandoavana hetra ireo mpitsikera, ary anisan'izany koa ny tsy fanarahandalàna hafa.
Tamin'ity volana ity, niatrika andrana fitspahana fitokisana nataonà loholona 28 isika. Samy niantso ny fialàn'ny PM Thaksin avokoa ireo famoriana vahoaka manohitra an'i Thaksin nahangona mpanao fihetsiketsehana 50.000 izay nampian'ireo fikambanan'ny mpianatra avy amin'ireo oniversite fototra ao Tailandy.
Nilaza i 2Bangkok.com tao anatin'ny fandalinany fa mety hiseho ny hoe hiady ary hijanona eo amin'ny fitondrana i Thaksin.
… Liana kokoa amin'ny fivoriana sy ny miandraikitra ny toerana inoany fa azy i Thaksin, tsy biby politika, fa mpitarika ara-barotra tsy mifanohitra amin'ny tsy fahombiazana. Tsy handeha anaty aloka toy ny mpanao politika mpanararaotra izy, fa hiezaka ny hamakivaky ny tadiofrivotra toy ny PDG iray miatrika krizy mitarika ny orinasany hamakivaky ny fitontonganan'ny varotra…
..Io no mety hiavian'ny fifandroritana, satria tsy hanaja ny fitsipika ara-politika Thai i Thaksin ary hiala raha vao hihevitra azy ho very fitokisana sy tsy ho afaka hitondra ny ‘fiarahamonina’ (mpianatra amin'ny oniversite, mpanao politika, mpikatroka, fa tsy voatery hoe ireo mpifidy)…